यस्ता छन् मानिस मर्नु भन्दा अघि देखा पर्ने १२ पुर्व संकेतहरु !! जानी राखौं | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता छन् मानिस मर्नु भन्दा अघि देखा पर्ने १२ पुर्व संकेतहरु !! जानी राखौं
जीवन र मृत्युलाई लिएर मानिसहरु प्रायजशो चिन्तित रहने गरेका छन् ।विज्ञानले पनि मृत्युको विकल्प दिन सकेको छैन । तर हिन्दु धर्मका देवता शिवले शिवपुराणमा मृत्यु वारे यस्ता कुरा भनेका छन् जसले मृत्यु हुन भन्दा अगाडी देखा पर्ने पुर्वसंकेतहरु बारे छन्। शिवपुराणमा शिव ले पार्वतीलाई मृत्युको सम्बन्धमा केहि विशेष पुर्व संकेतहरु बताएका छन् जस मार्फत कति समयमा कुनै मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने बारे सामान्य सचेत हुन सकिन्छ ।
यस्ता हुन्छन् मृत्यु पुर्व देखिने मानव शरीरमा देखा पर्ने संकेतहरुः शिवपुराण अनुसार जुन मानिसलाई ग्रहको दर्शन भएर पनि दिशाको ज्ञान हुँदैन, मनमा बेचैनी भैरहन्छ तब त्यस्ता मानिसको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ । जुन व्यक्तिलाई अचानक निलो झिंगाले आएर घेर्छ भने उसको आयु एक महीनामात्र बाँकी छ भन्ने बुझे हुन्छ ।
शिवपुराणमा भगवान शिवले भनेका छन् की जुन मनुष्यको शिरमा गिद्ध, काग र परेवा आएर बस्छन्, त्यो व्यक्ति एक महिना भित्र मर्नेछ । त्यस्तो शिवपुराणमा बताईएको छ । यदि अचानक कुनै व्यक्तिको शरीर सेतो या पहेंलो हुँदै गयो र रातो निशानहरु देखा पर्यो भने हामीले त्यो मानिसको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ भनेर बुझ्न सक्छौं ।जुन व्यक्तिको मुख,कान,आँखा, र जिव्रोले ठिक संग काम गरेको छैन भने शिवपुराणमा भनिए अनुसार त्यो व्यक्तिको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ ।
जुन मानिसले चन्द्रमा र सुर्यको आसपासको चमकिलो घेरालाई कालो र रातो देख्छन् भने त्यो मानिसको मृत्यु १५ दिन भित्र हुनेछ । त्रिदोष (वात, पित्त, कफ)मा जसको नाक बग्न थाल्छ, उसको जीवन १५ दिन भन्दा बढी टिक्दैन । यदि कुनै व्यक्तिको मुख र घाँटी पटक पटक सुक्न थाल्छ भने त्यो व्यक्तिको आयु पनि ६ महिना भन्दा लामो हुनेछैन। जब कुनै व्यक्तिलाई पानी, तेल,घ्यु तथा ऐनामा आफ्नो अनुहार देखिदैन भने त्यो व्यक्ति ६ महिना भन्दा बढी बाँच्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । यदि कसैले आफ्नो छायाँलाई टाउको बाहेक र आफ्नो छाया नै देख्दैनन् भने त्यस्ता व्यक्ति एक महिना पनि बाँच्न सक्दैनन्।
जब कुनै मानिसको देव्रे हात लगातार एक हप्ता सम्म झनझनाउँदै जान्छ तब त्यस व्यक्तिको आयु केवल १ महिना मात्र बाँकी छ भन्ने बुझुनुपर्छ । यदि सबै अंगमा झन्झानाउन थाल्छन् या सबै अंगमा अफ्ठ्यारो महसुस हुन थाल्छ, तालु सुक्न थाल्छ भने त्यो व्यक्ति मुस्किलले एक महिना मात्र बाच्न सक्नेछ ।
जुन व्यक्तिलाई ध्रुव तारा अथवा सूर्यमंडलको ठिक संग दर्शन हुँदैन । रातमा इंद्रधनुष र दिउँसोमा उल्कापात भएको देखापर्छ तथा गिद्द र कागले घेरेको जस्तो महसुस हुन्छ तब त्यो व्यक्तिको पनि आयु मुस्किलले ६ महिना भन्दा बढी हुनेछैन भनेर शिवपुराणमा बताईएको छ ।
जुन व्यक्ति अचानक सूर्य र चन्द्रमालाई राहुले ग्रस्त भएको देख्नेछ (चन्द्रमा र सुर्य कालो भएको देख्नु )र सम्पूर्ण दिशा घुमिरहेको देख्न थालिन्छ भने त्यो व्यक्तिको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ । शिवपुराण अनुसार जुन व्यक्ति हरिणको पछी पछी हुने शिकारिहरुको भयानक आवाजलाइ तुरुन्त सुन्न सक्दैनन् (जस्तै बाघरसिंह ) त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु ६ महिना भित्र हुनेछ । शिवपुराण अनुसार जुन व्यक्तिलाई आगोको ज्योति राम्रो संग देखिदैन र चारै तिर अन्धकार मात्रै देखिन्छ तव उसको जीवन पनि ६ महिना भन्दा लामो समय टिक्दैन ।
कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए । ‘हरेक गुफामा रहेका विभिन्न खालका आकृति असाध्यै सुन्दर छन्,’ उनले भने । स्थानीयले कुमाखमा रहेको गुफाबाट पठाएका कुकुरहरू बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ । बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए, जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने, तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन् ।
कुमाखको टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ । यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ । कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन् । त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन् ।
कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ ।
मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन् । संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला ।
राजाहरू पनि यहाँ बर्सेनि वैशाखमा आफ्नो देवाली मनाउन आउँथे। यो शान्त वातावरणमा रमेको छ। त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्छ। यो मन्दिरमा बर्सेनि हजारौं भक्तजन आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न आउँछन्। मूलतः दसैंको बेला यहाँ विशेष मेला लाग्छ।
दसैंको नवरात्रीमा यहाँ कैयौं भक्तजनहरू हाँस, कुखुरा राँगो, बोकाको बलि दिन्छन्। यो मन्दिर धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोटले धनी छ।पहिलेपहिले यो मन्दिरमा देवीकै मुखमा नरिवल फुटाइने गरेकाले देवीका मुखाकृति केही हदसम्म बचेको छ। माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ!! सेयर लाईक र कमेन्ट गर्न हेला नगरौ अनिष्ट हुनसक्छ । frommandu
जतिसुकै बिजि भएपनी केबल २ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला ! नपढे तपाईंलाई ठुलो पछुतो हुनेछ